पर्वतमा डिसइन्फेक्सन गर्ने कर्मचारीमा कोरोेना संक्रमण, आठ जनाले कोरोना जिते, ११ जनामा दोश्रोपटक पनि पोजेटिभ - News site from Nepal
पर्वतमा डिसइन्फेक्सन गर्ने कर्मचारीमा कोरोेना संक्रमण, आठ जनाले कोरोना जिते, ११ जनामा दोश्रोपटक पनि पोजेटिभ
पर्वत – पर्वतमा सञ्चालित अस्थायी कोरोना अस्पताल र क्वारेन्टाइनमा डिस इन्फेक्सन छर्कने ब्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । गण्डकी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परिक्षणमा ती ब्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
यो संगै पर्वतमा संक्रमितको संख्या ७१ पुगेको छ । अस्पताल, क्वारेन्टाईनहरुमा डिसइन्फेक्सन छर्किने ५३ बर्षिय पुरुष कुश्मा नगरपालिकाकै हुन । उनलाई आइसोलेसनमा लैजाने तयारी भएको पर्वत कोरोना अस्पतालका सदस्य सचिव डा. शिशिर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी पर्वत कोरोना अस्थायी अस्पतालमा उपचार गराईरहेका ८ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । संक्रमितको रिर्पोट नेगेटिभ आएपछि आजै बिदाई गरिने भएको छ ।
यस अघि दुई चिकित्सक सहित पर्वतका ११ जनामा कोरोना संक्रमित घर फर्किसकेका छन् । आइसोलेसनमा उपचार गराईरहेका ११ जनाको भने दोश्रो पटकको रिपोर्ट पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएका कारण उपचारमै रहने डा. देबकोटाले जानकारी दिनुभयो ।